Qiso jaceyl: Ma aanan ogeyn waxa iga maqan - Cishqi.com
Muqdisho (Cishqi.com) – Akhriso qiso jaceyl gaar ahaan qiso xanuun badan oo murugo iyo jaceyl isugu jiro waxayna u dhacday sida soo socoto.
Aan kula wadaagno qiso jaceyl gaar ahaan qiso murugo iyo dareen leh. Qisadani ayaa ah qiso dhab ah oo runtii xanuun iyo murugo leh. Waxa ayna ku dhacday haweeney dooneysay in ay guursato nin romantic ah balse guursatay nin kale oo aanan iyadu u qalmin.
Dhanka kale qormadaan qormadii ka horeysay waxaan ku soo qaaday erayo jaceyl a-z iyo qisooyin badan gaar ahaan kuwo isugu jiro qisooyin jaceyl ah iyo qisooyin kale oo dhab ah. Haddii aad u baahantahay in aad akhriso guji linkiga hoose oo kaliya:
Hooyo Iyo wiilkeeda – Qiso jaceyl Oo Xanuun Badan
Sidoo kale waxaan akhristayaasheena la wadaagnay erayo marka aad u dirto lamaanahaaga qalbigiisa taabanayo, haddii aad xiiseyneyso erayo nuucaas halkaan riix: Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh A-Z Qeybtii 1-aad
Qiso jaceyl oo murugo badan
Maanan ogeyn waxa iga maqan,
Waxaan guursaday nin anigoo jiro 20 sano oo nin oo dhan uusan xisaabta iigu jirin, laakiin iima fiicneyn isaga.
Guurkeygu ma ahayn guurka aan ku riyoonayay, isagu daruuri uma ahayn inuu sameeyo wax qalad ah, dambina kuma lahayn. Waxaan la noolaa mid fursadiisa lumiyay. Hadda, anigu ma ihi „naagtii hore ” haddii xitaa ay jiraan wax caynkaas ah.
Waan jeclahay naftayda. Xaqiiqdii waxaa jira waxyaabo badan oo aan doonayo inaan nolosheyda ku sii hormariyo. Hadda dhib kuma qabo da’dayda, ama caqligayga, ama sida jidhkaygu uu e egyahay, ama shakhsiyaddayda – waxyaabahaas oo u muuqda inay si khaldan u dhibaateeyaan haweenka oo keliya.
Aniga ha i wareerin hana idhibin sabab kasta ha noqotee. Waxaan leeyahay xirfad aan ku helo wax kabadan lacag igu filan kaligey si aan ugu noolaado nolol raaxo iyo farxad leh.
Waan aqaanaa sida loo isticmaalo qalabka korontada, guriga loogu xiro nalalka, loo hagaajiyo baabuurkeyga iyo Google-ka wax kasta looga raadiyo. Waxaan u leeyahay taa oo aan ula jeedaa in ay kuwa kale aniga igu tusaale qaataan, macnaha dumarka kale.
Ma jiro qof gardaro macno-darro ah aqbalayo. Waan ogahay inaan madax adagahay sida baqasha oo kale laakin guurku waa mid aan dhamaad lahayn. Sidaas oo ay tahay inkasta oo aan ahaa qofkii ugu horreeyay ee nolosha guriga ku filan, soona shaqeysto, hagajisto, waxyaalaha ugu badan ee guriga yaal, kuna korsado carruurtayda inta badan kaligay.
13 sano ayeey igu qaatay guurkaas aan qiimaha lahayn. Ugu dambeys, ninkayga wuxuu dareemay inaanan asiga u baahnayn, maxaa yeelay waxaan ahay qof karti badan. Laakiin in uu sidaa ku fikiro wuu ku qaldanaa. Waxaan u baahday taageero. Waxaan u baahday lamaane, saaxiib. Xitaa qof arki lahaa sida adag ee aan u shaqeynayo si aan madaxayga kor uga ilaaliyo biyaha.
Wax kasta ayaan maamuli kari waayey; walina ma awoodo. aragti ahaan marka loo eego sida shucuurteydu u go’doonsan tahay, waxaan la halgamay madhalaysnimo muddo saddex sano ah; Waxay ahayd inaan qaato tanno daawooyin ah iyo tallaallo xanuun igu riday, daal miiran, qandho, jir xanuun iyo madax xanuun joogto ah.
Ma aha in la xuso qulqulatada shucuurta ee bil kasta iyada oo aan lagu guuldaraysanin inaad aragto hal khad casaan ah oo ku yaal usha nacaladda. Dareenka aad ku dhex socoto xirmooyin badan oo baaritaanno uur leh, ama sawiro ka qaadashada dhalashada ilmahaaga. Wax badan oo loo dulqaadan karo; Aad ayaan ugu furnaa halgankayga, maxaa yeelay waxaan u maleynayaa inay dadka kale caawisay.
Si uun, ninkaygu xitaa kamuu warqabin tani waxay ahayd wax aan taageero ugu baahnaa. Wax fikrad ah kama qabin, sababta oo ah uma aanan sheegin ama si toos ah uma aanan weyddiin. wuu iska weynaaday intaas. wuxuu ahaa shan jir xannibmay isagoo qaan-gaadh ah- oo aan lahayn awood uu taageero ku siiyo habkaas.
Heeso Qoraal Ah Oo Aad U Macaan
Mar alla markii aan carruur dhaley, runti waxaa dusha iga sii koray culeys kii ugu badnaa, waxaan ubaahday caawinaad ka badan Intii hore. Waqtigayga intiisa badan waxaan ku qaatay dhib iyo rafaad joogto ah, waxaa isku key tagay daal, shaqo badan, cunto karis iyo tarbiyeynta caruurta. Si ay caruurteyda u noqdaan caruur tarbiyeysan.
Ninkayga wuxuu teleefonkiisa ku ciyaari jiray game, inta badanna wuu iska indho tiray. Waqtigiisa inta badan wuxuu ku qaatay ciyaartaas iyo mar uu banaanka ku soo fadhi diriro. Aniga waqti maba uusan isiin jirin marka laga reebo in uu habeenkii dhinaceyga jiifto subaxdiina uu ka soo kaco kadibna halkaa uu ka sii bilaabo.
Wax badan ayeey igu qaadatay inaan u dulqaato balse ugu dambeys waxaan weydiistay inuu iska key furo oo aan kala tagno.
Intaan ka badan ma dulqaadan karo fadlan iska key fur ayaan hadalkeyga ku soo gabagabeeyay. Furitaankii Kadib waa nafisay, wax walba way ka fiicnaadeen sidii hore. Waxaan neefsaday neef igu dhaganeyd. Waxaana ka xoroobay culays aad u badan.
Waxaan dareemayay xuriyad iyo nafis, aadna waan ufaraxsanaa, waxaa intaa ii dheeraa dibna umaan eegin gadaal oo wax walbaa waxay noqdeen dhag dhag. Waana iska fiicanaaday oo waxaa noqday naag naag dhaaftay.
Hubaal, waxaan habeen walbaa ku gurguurtaa sariirta kaligeey, anigoo dareemayo inaan diyaar u ahay ciyaarta adag ee sariirta., jirkeyguna uu u baahanyahay taabasho diiran. Carruurtu way riyoonayaan oo marba dhinac isu gadinayaan laakiin almuhiim anigu waxaan ahay xur waxaana ahay qof nolosheeda ku faraxsan.
Qoraa: Ramla Cabdiraxmaan (Dhameystiran)